निर्मला प्रकरणलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्ने पात्रलाई अदालतले किन गर्‍यो एक घण्टा थुन्ने ‘तुच्छ सजाय’? – MySansar
सुदूर पश्चिमको एउटा खोल्सामा भएको* अपराधको घटनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा ल्याउने मात्र हैन, त्यसलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गरी रहस्यमय घटनाका रुपमा प्रचार गराई भिआइपी अपराधीको हौवा खडा गर्ने प्रमुख पात्र खेम भण्डारीलाई कन्चनपुर जिल्ला अदालतले ‘तुच्छ सजाय’ दिएको छ। अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै उनलाई ‘तुच्छ सजाय’का रुपमा एक रुपैयाँ जरिवाना र एक घण्टा जेलको सजाय न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले असार ३० गते सुनाएको हो। के हो त यो ‘तुच्छ सजाय’ भनेको? अदालतको व्याख्या पनि रोचक नै छ।
के भन्छन् खेम भण्डारी?
खेम भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा फेरि फैसलामा भनिए जस्तै हिरो हुने पाराले प्रस्तुत भएका छन्। फाँसीमा जान्छु तर माफी माग्दिनँ भन्दै स्टाटस डिलिट नगर्ने र पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।
उच्च अदालतमा उनले यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउने छन्। त्यहाँ दुई कुरा हुनसक्छ- कि सजाय कायम हुन्छ। कि बढी वा घटी हुनसक्छ।
(*यसअघि सुदूरपश्चिमको खोल्सामा भएको अपराधको घटना लेखिएकोमा महेन्द्रनगरलाई नै खोल्सा भन्ने अर्थ लाग्यो कि भन्ने सुझाव आएको हुँदा सम्पादन गरिएको हो। खासमा लाश भेटिएको खोल्सा छेउमा थियो र त्यही भन्न खोजिएको थियो।)
3 thoughts on “निर्मला प्रकरणलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्ने पात्रलाई अदालतले किन गर्‍यो एक घण्टा थुन्ने ‘तुच्छ सजाय’?”
यतिसम्म हुँदा पनि खेमेलाई केही गर्न नसक्नु भनेको चैँ लाचारी नै हो । अदालतले केही नगरे पनि सामाजिक रुपमा यो मान्छे बहिस्कृत हुनुपर्थ्यो । तर बिरालो को घाँटीमा घन्टी बान्ने कोही भएनन् सब खेम दाइ भन्दै नतमस्तक हुन्छन् । यो चैँ अति नै हो
दीपेन्द्र सुवेदी says:
अहो फैसला पढ्दा त अदातललाई लास्टै रिस उठ्ने बनाएको रहेछ खेम भण्डारीले । अरुलाई पनि यस्तै बनाएको हो ला । चौथो अंग भन्दै सहेर बसेको ले यस्तो भाको हो
साँच्चिकै सुपर इगोबाट ग्रसित रैछ खेम भण्डारी । यस्तालाई विश्वास गरेर बसे अरु महान पत्रकारहरु पनि । आत्मालोचना होस् ।